Optometrist Magirazi Series
Zvishandiso zveOphthalmic Surgical Instruments
Zvinoratidza kuti imbwa dzinogonawo kubata chirwere chemaziso.
Sei maziso embwa akacheneruka? Chirwere chemaziso here? Sei imbwa yangu iine cataract? Cataract imhando yechirwere chinokonzerwa nekuchinja mukujeka kwe lens, ingave iyo lens pachayo kana iyo lens capsular opacity. Cataracts inogona kukamurwa kuita zvikamu zvitatu kubva ...
Kune maziso ako, dzidza kupfeka macontact lens nenzira kwayo.
Maconta lens anozivikanwawo semacontact lens, ari malenzi anopfekwa pa cornea yeziso kugadzirisa kuona kana kudzivirira maziso. Malenzi ekuonana haangounze kuvandudzwa kukuru kune varwere vane zvikanganiso zvinoratidzira senge myopia, hyperopia, uye astigmatism maererano nechitarisiko uye conven...
Cataract chirwere chemaziso chine hupofu hwepamusoro-soro munyika yedu! Nzira yekudzivirira sei? Nzira yekurapa?
Cataract, iyo inowanzonzi cataract, yagara iri hosha ine mwero wepamusoro wehupofu munyika. Vanhu vakwegura vakawanda vanotambura ne<em>cataract, uye vanyoro vane pesvedzero duku pakuona; mune dzakaoma, kushayikwa kwekurapa kwekuvhiya panguva yakakodzera ndicho chikonzero chikuru chebofu ...
Wakaenda kukiriniki yeophthalmology panguva yedenda? Ngatisarudzei mushure mekuverenga chinyorwa ichi.
Kumwe kubuda kweiyo coronavirus nyowani kwakanganisa hupenyu hwevanhu muChengdu, kuyedza hungwaru nebasa revanhu vasingaverengeki! Mukupindura denda, basa revashandi vezvokurapa zvirokwazvo tariro youpenyu huzhinji, asi basa ravanogona kuita rakaganhurirwa zvikuru. Sezvo Dr. Trude...
Une zviratidzo izvi mumaziso ako here? Inofanira kutorwa zvakakomba.
1. Chii chinokonzera kurasikirwa kwemaonero? Ziso rakafanana nekamera. Zvisizvo muzvikamu zvakasiyana zvinogona kukonzera kurasikirwa kwekuona. Pane zvikonzero zvakawanda, senge refractive zvikanganiso, cataracts, keratopathy, fundus chirwere, uveitis uye zvimwe zvirwere zvemaziso. Iyo optic nerve nzira kuseri kweziso kana mu...
Ramba wakatarira kunyeredzi, uye chengetedza “muchadenga” womwana wako.
Nguva pfupi yadarika, National Health Commission yakatanga chikamu chechipiri chebasa renyika rekutyaira pamatekinoroji akakodzera ekudzivirira uye kudzora myopia muvana nevechiri kuyaruka, uye yakapa "Nhungamiro Yehunyanzvi Tekinoroji Yekudzivirira uye Kudzora kweMyopia muVana ...
Kambani yeShidakang yakapinda muChengdu Chongqing Economic Circle Health Tourism Expo yekutanga
Mhemberero yekuvhura yeExpo Kubva Gunyana 9 kusvika 11, yekutanga Chengdu Chongqing Shuangcheng Economic Circle International Health Tourism Expo (inozonzi "Great Health Expo") yakaitirwa muChengdu Century City International Convention uye Exhibition Center pasi pe ...
Iyo yakanyanya kushamwaridzana nzira yekudzivirira uye kudzora myopia
Nerutsigiro rwekutsvakurudza kwemhuka uye kwevanhu, kuvhenekera kwepamusoro ndiyo dzidziso yakakura kwazvo. Kuwedzera mwenje ndeimwe yenzira dzakatenderedza nharaunda kune myopia. Kusimba kwechiedza chekunze chekunze kwakakwirisa kakapetwa mazana pane kusimba kwechiedza chemukati. Zvebvunzo...
SDK inokuyeuchidza kuti utarisire maziso ako
Rudo rwekuchengetedza maziso Dambudziko re myopia muvana ragara richinyanya kunetseka nenzanga. Mumakore achangopfuura, yakaratidza chiitiko chepamusoro uye maitiro ezera rechidiki, izvo zvinokanganisa zvakanyanya hutano hwemuviri uye hwepfungwa hwevana ....
SDK yakapinda mumusangano wedzidzo wekuvhiya wecataract refractive
Musi waZvita 18, iyo "20th National Musangano weCataract uye Refractive Surgery (CSCRS)" yakaitwa neChinese Medical Association, Ophthalmology Branch yeChinese Medical Association, uye Cataract uye Intraocular Lens Boka reOphthalmology Bazi re ...